Madaxii Waaxda Caafimaadka Qoyska Ee Wasaaradda Caafimaadka Oo Iscasilay | Somaliland Today
← Laascaanood: 115 Arday Oo Ka Qalin-Jabiyay Jaamacadda Nugaal
Siyaasiyiin Ka Mid Ah Xisbiga KULMIYE Oo Wasiirrada Xukuumadda Ku Xidhiidhiyey Warar Madow Lagu Galiyey Musharaxnimada Madaxwaynaha →
Madaxii Waaxda Caafimaadka Qoyska Ee Wasaaradda Caafimaadka Oo Iscasilay
(SLT-Hargeysa) – Wasiirka Caafimaadka Somaliland Saleeban Ciise Axmed (Xagto-toosiye), ayaa ka aqbalay codsi iscasilaad ah 11 Bishan October, Agaasime waaxeedkii Wasaaraddiisa ee waaxda Caafimaadka Qoyska Khadra Xaaji Ibraahim oo 29-kii bishii hore u gudbisay warqad iscasilaad ah.
Haweenaydan xilka iska casishay oo sida ku cad qoraalkeeda aan wax sabab ah u cuskan istiqaalada ay isku casishay, ayaa wasaaradda u qaabilsanayd Maamulka waaxda Adeegyada caafimaadka ee qoyska, sida xanaannooyinka iyo goobaha kale ee u gaarka ah qoyska.
Ma cadda sababta ku keliftay talaabadan, hase ahaatee sida ay ilo-wareedyo laga helay Wasaaraddu tibaaxeen, waxay iscasilaadeedu ka dambeysay, kaddib markii caqabad dhanka shaqada ah kala kulantay xubno ka mid ah madaxda ugu saraysa wasaaradda.
Waxa la sheegay inay ka biyo diiday Lacag loogu talo galay Tababar ay u qabatay qaar ka mid ah howl-wadeenada xarumaha Hooyada iyo Dhalaanka ee Gobolka Maroodi-jeex oo la lunsaday, taasoo farta lagu godayo inuu lunsaday agaasimaha Guud ee Wasaaradaasi.
Laakiise waxa la sheegay in markii ay gabadhani iscasishay lacagta shaqaalaha tababarka qaatay ay Wasaaraddu bixisay, isla markaana aan wax dabo gal ah iyo la xisaabtan ah lagu sameynin sababta loo waayay beerdhiyamka shaqaalaha tababarka qaatay oo tiradooda lagu sheegay 140 oo Kalkaaliyeyaal iyo Umulisooyin isugu jira.
Warqada iscasilaada sarkaalka
Nuqullo ka mid ah warqada ay isku casishay sarkaalku iyo aqbalaada Wasiirka , oo aanu helnay ayaan wax tafaasiil ah lagu bixin ka sekow labada go’aan oo si kooban loogu sheegay qoraalada ay isdhaafsadeen.
Warqada ay isku casishay sarkaalku ayaa u dhignayd sidan: “anigoo ah Dr. Khadra H. Ibraahim, ahna madaxa Waaxda Caafimadka qoyska ee wasaaradda Caafimaadka waxaan maanta (wakhtigaasi) oo ay Taariikhdu tahay 29.09.2014, iska casilay xilkii aan u hayay Wasaaradda, anigoo idinka codsanaya inaad iga aqbashaan codsigan.” Ayey ku sheegtay Istiqaalad ay ku socodsiisay Agaasimaha Wasaaradda.
Dhinaca kale, Wasiirka Wasaarada Saleeban Ciise Xaglo-toosiye, oo istiqaaladan ka aqbalay, ayaa qoraalkiisa ku sheegay sidan: “Markaan eegay waraaqda ku Taariikhaysan 29.09.2014, kuna saabsanayd codsi iscasilaad xil shaqo, xilkaasoo ahaa madaxa waaxda Caafimaadka qoyska ee wasaaradda Caafimaadka, waxaan kaa aqbalay codsigaagii iscasilaada ahaa”ayuu ugu jawaabay Dr. Xaglo-toosiye Sarkaalka iscasilay, 11-kii bishan.
Waa sarkaalkii ugu horeeyey ee Wasaaraddan iska casilay mid ka mid ah Xafiisyada madaxqeybeedyada intii ay Maamulayeen Wasiirka iyo Agaasimaha hada madaxda ka ah oo sanad in ka badan joogay.